Kiiskii Keshvari oo maxkamada sare ee Norway tagay. - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Kiiskii Keshvari oo maxkamada sare ee Norway tagay.
Kiiskii Keshvari oo maxkamada sare ee Norway tagay.
Maxkamada sarre ee dalkan Norway ayaa aqbashay dhageysiga kiiska dacwada racfaanka ah ee xildhibaan hore Mezyar Keshvari uu ka qaatay xukunkii maxkamada hoos ee ahaa 7-da bilood ee xabsiga ah.
Keshvari ayaa loo xukumay danbi ah inuu sifo aan sharci aheyn baarlamaanka Norway uga qaadan jiray lacago uusan xaq u laheyn, isaga oo soo xareyn jiray xisaabaadka safaro uu galay oo been abuur ah. Wuxuuna Keshvari qirtay iuu baarlamaanka Norway ka khiyaanay lacag gaareyso 450.000 kr.
Keshvari ayaa hada ka dacwoonaya in xukunka 7-da bilood ah uu hayay mid adag, marka loo fiiriyo inuu danbiga qirtay, sidoo kalena uu dib qasnada baarlamaanka ugu celiyay lacagtii uu sifada sharci darada ah ku helay.
Maxkamada darajada labaad ayaan horey waxbo uga badalin xukunka Keshvari, wuxuuna hada kiiskiisu tagay maxkamada sare oo mar kale dacwadiisa dhageysan doonto.
Xigasho/kilde: SAKEN MOT MAZYAR KESHVARI BEHANDLES I HØYESTERETT
Previous articleSoomaalida Sarpsborg oo warbaahinta la hadashay, sheegteyna dareenkooda.
Next articleLørenskog: 2 caruur ah oo meyd ah iyo hooyadood oo dhaawac ah oo gurigooda laga helay.